Jumiya waxay galeysaa NYSE - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA • TECH & TELECOM Jumiya waxay gasho New York Stock Exchange
Jumiya waxay gasho New York Stock Exchange
Marka aad soo gasho New York Stock Exchange, goobta internetka ee wax laga iibsado ee Morocco, Jumia, waxay fulisaa dareen rajo badan oo hore loo aasay. "Jumia waxay had iyo jeer rabtay inay kor u qaaddo caasimadda iyada oo loo marayo maalgashadayaasha," ayuu yiri Isniintii Casablanca, Larbi Alaoui Belrhiti, agaasimaha Jumia Morocco, intii lagu jiray shir saxaafadeed si loo caddeeyo liiskan. Wixii isaga ah, qiimaha dheeraadka ah ee hordhaca ah ee is-weydaarsigan caalamiga ah waa in uu "helaa suuq weyn". Laakiin taasi maaha sabab keliya. Mr. Alaoui Belrhiti waxa uu taxayaa kuwa kale. "Sababta labaad waxay tahay in lagu kalsoonaado shuraakadayada. Maanta qayb ka mid ah shahaadadan cusub ee New York Stock Exchange sidoo kale waa ballanqaad kalsooni ah oo kalsooni badan ka helaya shuraako la shaqeeya Jumia, "ayuu yiri.
Maamulaha ayaa sidoo kale leh fikrad loogu tala galay iibiyaasha saddexaad. "Maanta, waxaan leenahay saaxiibo badan oo leh magacya doonaya in ay ku qaataan e-ganacsi," ayuu yidhi. Wixii isaga ah, la shaqeynta shirkad ku qoran liiska saamiyada ayaa sidoo kale faa'iido leh. Intaa waxaa dheer, kalsoonidii la-hawlgalayaashu waxay ku kordhinaysaa macaamiisha Moroccan. "Waxaan sidoo kale ka shaqaynaynaa kalsoonida macaamilka," ayuu sii waday.
Fikradiisa, waa muhiim in macaamilka uu ogaado in uu isticmaalayo shirkad ganacsi oo wada ganacsi ah. Hase ahaatee, agaasimaha ayaa sidoo kale u malaynaya in talaabooyinka doonaya inay ku biiraan Jumiya. "Ka mid ahaanshaha shirkad ganacsi oo dadwaynaha ah ayaan la mid ahayn bilowga," ayuu yiri Alaoui Belrhiti. Marka laga soo tago sababahan oo qeexaya xulashada qiimeyntan, DG waxay ka hadashaa ikhtiyaarka suuqa Suuqa Mareykanka. "Uma baahnid inaad ka mid ahaato wax ka badan hal suuq. Hadafku waa inuu galo suuqa saamiyada oo si fiican u shaqeeya baahiyahayaga, "ayuu yidhi. Sida laga soo xigtay isaga, Jumia, oo ah shirkad tiknoolajiyadeed oo ka hawl gasha Afrika, ayaa wax ka bartay isbeddelada kala duwan, oo ay ku jiraan London iyo kuwo kale. "Sida iska cad New York Stock Exchange waa midka ugu xiiso badan sababtoo ah waa mid ka mid ah shirkadaha tiknoolajiyada badan oo liis gareynaya, waana shirkada shirkado badan oo leh qaab ganacsi oo la mid ah kuwa noo jooga. Taasi waa sababta doorashada ay tahay mid macquul ah, "ayuu yiri. Intaa waxaa dheer, IPO ayaa ka dhacday Jumia Morocco oo keliya laakiin sidoo kale kooxda Jumia, oo ku yaala labaatan dal oo Afrika ah. Horeba Morocco waxay ka mid tahay shantii wadan ee ugu muhiimsan ee Jumia oo ay ka mid yihiin Nigeria, Masar, Kenya, Morocco iyo Ivory Coast.
Sida uu sheegay, wadamadani waxay ka faa'iideysan doonaan qiimadan sidan oo kale sida Morocco. "Waxay ku saabsan tahay in la sii wado maalgashiga horumarinta dalal kala duwan. Marka la eego shuruudo la taaban karo, waxaan mar walba kor u qaadnay macaashka saamiga. Maanta waxay noqon doontaa tallaabooyinkan oo faa'iido u leh kooxaha kuwaas oo sidoo kale jeclaan lahaa inay noqdaan saamileyda Jumia. Lacagahan waxaa dib loo isticmaalay si isku mid ah si ay u taageeraan tallaabooyinka horumarinta, "ayuu raaciyay agaasimaha. Munaasabadda, wuxuu hoggaamiyaa tusaalihii waayo-aragnimada Jumiya oo lahaa in meelo badan lagu maalgeliyo. Maanta, heerka dhismaha sahayda, Jumia waxay ahayd inay abuurto shabakadeeda sahayda u gaarka ah si ay awood ugu yeelato inay si dhakhso ah ugu gudbiso shuruudaha caalamiga ah.
Cameroon waxay raadineysaa bilyan doolar oo ah FCFA oo ku saabsan suuqa ganacsiga BEAC
Amarka Hore ee Jedi Jirdilka: Amy Hennig wuxuu la yaabay xiriirka Farshaxanka elektaroonigga ah